N26, Openbank uye Orange Cash, zvitsva zvinowedzerwa kuApple Pay kuSpain | IPhone nhau
N26, Openbank uye Orange Cash, zvitsva zvinowedzerwa kuApple Pay kuSpain
Rave rinenge gore kubva Apple Pay yatanga muSpain neBanco Santander, American Express uye Carrefour Pass, uye mushure memwedzi yakawanda pasina kuwedzerwa kutsva kune ino yekubhadhara Apple sevhisi zvinoita sekunge kambani yakatsika accelerator yekuisa vatsva pamberi pe kupera kwa2017. Sezvakavimbiswa, N26 yakabatana gore risati rapera, asi mamwe masangano maviri matsva akawedzerwa kuApple Pay pasina ziviso yapfuura: Openbank neOrange Cash..
Iine ino yakakura katalog yezvinhu zvinoshanda pamwe neApple Pay Apple yekubhadhara chikuva inova imwe yeakanyanya kupararira munyika medu, kunyanya kana tichifunga huwandu hwemashandisi anoshanda anoenderana neiyi nzira yekubhadhara, kubva ku iPhone 6 zvichienda mberi. Iko kune zvakare sarudzo dzezvose zvido: kubva kune akabhadharwa makadhi kuenda online mabhangi kana akajairika mabhangi.
Kune avo vane inishuwarenzi yemari isingadi kujoina Apple Pay, pane mikana inonakidza kwazvo yekugona kushandisa chikuva cheApple chekubhadhara. N26 kana ImaginBank mabhengi maviri epamhepo anotendera iwe kuti ugadzire account mumaminetsi mashoma zvachose online, iine mahara debit kadhi pasina mari yekuchengetedza. Ipo ImaginBank iine network yayo yeCaixabank ATM, N26 inokutendera kuti utore kanokwana ka5 pamwedzi pane chero ATM.. Maakaundi ese ari maviri anotarisirwa nekuda kwekushandisa kwavo kwenhare mbozha. Boon kadhi rakabhadharwa risina kana account yekubhangi yakaisirwa, asi inosanganisira diki komisheni kana uchichichinjazve, uye haina mukana wekubuda mumaATM.
Orange Cash ipuratifomu yeOrange inobhadhara iyo yakasarudzira vanhu vadiki sevateereri, uye kuti mushure memakore akati wandei mumusika wanga uchida kujoina Apple kubhadhara chikuva, muchirongwa icho vamwe vangatevere. Panzvimbo pekuchema kuti Apple haivape mukana weiyo NFC chip kuti vakwanise kubhadhara zvakananga kubva kunharembozha, vafunga kuti "kana iwe usingakwanise kukunda muvengi, batana naye.", uye ikozvino kadhi rako rekubhadharira rinosanganisirwa muApple Pay kuitira kuti havasi ivo chete vashandisi veApple vanogona kubhadhara nefoni yavo.
Zvinotaridza kuti mushure megore rinenge gore mumusika Apple Pay iri kuwedzera kukosha muSpain, inhau huru kune avo vedu vanoda kupedzisa kutora makadhi edu nesu, sezvo nyika yedu iri yeaya akapinda munzvimbo dzisingabhadharwe dzekubhadhara zvakanyanya, iyo chete inodikanwa yeApple Pay kushanda kana uchibhadhara. Isu tinovimba kuti mamwe ese emari masangano anoramba, akadai seBankia kana BBVA, neaya atove kushanda mune dzimwe nyika senge ING, achabatana munguva pfupi inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » N26, Openbank uye Orange Cash, zvitsva zvinowedzerwa kuApple Pay kuSpain
Iyo ING Spain chinhu chinoshamisa. Kuti vabvise maakaundi avo uye vadzokere kuHolland.
iOS 11.2 ichaunza nekuchaja nekukurumidza kwema 7,5w mawadhi asina waya
Ivo vanofungidzira makumi maviri emamiriyoni kutengesa kweAirPod uye vanotarisira zvimwe